ပြည်တွင်းသတင်း | ဒီပကျော်(နည်းပညာ) | Page 139
Category Archives: ပြည်တွင်းသတင်း
အရပ်သားအစိုးရသစ် တက်လာပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပတဲ့ ရန်ကုန်သင်္ကြန်မှာ သံချပ်အဖွဲ့ ၁၀ ဖွဲ့ထက်မနည်း ဖျော်ဖြေနေကြပေမဲ့ သံချပ်အများစုဟာ ဖိနှပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေ ပိုများတဲ့ စစ်အစိုးရ လက်ထက်မှာတုန်းကလို လှောင်ပြောင်သံချပ်ထိုးစရာ အချက်လက်တွေ နည်းလာနေတယ်လို့ သံချပ် လေ့လာစောင့်ကြည့်သူတွေက ပြောပါတယ်။
သံချပ်တိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ ပြုပြင်ဖို့လိုတဲ့ အချက်တွေကို ထောက်ပြစရာတွေကို ဇောင်းပေးပြီး သံချပ်ထိုးကြတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကိုဉာဏ်ဝင်းအောင်က တင်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာ့ရိုးရာအတာသင်္ကြန်ရဲ့ ထုံးစံတွေနဲ့အညီ သံချပ်ယဉ်ကျေးမှုကို အားကောင်းလာအောင် ပြန်လည် လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ သင်္ကြန်ကာလမတိုင်ခင် ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ် ရန်ကုန်သင်္ကြန်မှာ သံချပ်အဖွဲ့ ၁၀ ဖွဲ့ထက်မနည်း လိုက်လံ ဖျော်ဖြေနေတဲ့အထဲမှာ “သာဓုပါဗျာ”သံချပ်အဖွဲ့က သူတို့ရဲ့ပျက်လုံးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဟာသသရုပ်ဆောင် လူရွှင်တော် မောင်မေတ္တာပြောတာက –
“ဥပမာဗျာ – ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာပါ ဟိုတလောတုန်းက အစည်းအဝေးလုပ်တော့ဗျာ အဲဒီမှာ တောင်းဆိုတာတွေက များတယ်ဗျ။ တောင်းတာက ဘာများသလဲဆိုတော့ –
လွှတ်တော်ကြီးမှာ တင်ပြရတာ ရီချင်စရာ….
ကတ္တရာလမ်းတွေ ပေ ခိုးတောင်းတာ စည်ပင်ပါ….
သြော် ရီရတာ၊ ရီရတာ သင်္ကြန်ကျတော့ အကုန်လိုက်ပြောမှာ….
ဟေ့ အဆဲခံရတော့မယ်ဟေ့။ အဆဲခံရတော့မယ်….
ဟဲဟဲ အဲ့လိုလေးတွေပေါ့။ အဲတော့ ဒီမိုကရေစီအတွက် လူတွေက အသက်ပေးသွားကြတယ်ဗျ။ ကလေးတွေ၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ၊ ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတွေ၊ အသက်ပေးသွားကြတယ်။ အဲဒီအသက်ပေးသွားကြတဲ့ ၀ိဥာဉ်တွေက လွှတ်တော်ထဲရောက်တယ်။ လွှတ်တော်ထိုင်ခုံအောက်မှာ ရှိနေတယ်။ တခါတခါ အစိပ်သားတွေ ထထပြီး မတ်တပ်ရပ်တယ်။ အဲဒီဝိဥာဉ်တွေ ထထခြောက်လို့ သူတို့ မတ်တပ် ထထရပ်တာ။ အဲ့လို ရီစရာလေးပေါ့။”
ဒါပေမဲ့လည်း ရန်ကုန်သင်္ကြန်မှာပျက်တဲ့ သံချပ်အဖွဲ့တွေဟာ လှောင်ပြောင်သံချပ်ထိုးစရာ အချက်လက် နည်းလာနေတယ်လို့ သံချပ်တွေ လေ့လာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ ကိုသီဟသွေးက ပြောပါတယ်။
“ပြဿနာက ဘာလဲဆိုတော့ဗျာ အစိုးရကအသစ်ဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာ အရင်လို ဦးသိန်းစိန်အစိုးရတို့၊ စစ်အစိုးရတို့လို သံချပ်ထိုးစရာ ထောက်စရာအကွက်က လောလောဆယ် မရှိကြဘူးဗျ။ အစာပလာနည်းတာပေါ့ဗျာ နော်။ ပစ်မှတ်တွေကလည်း နည်းသွားတယ်။ နည်းသွားတဲ့အခါကျတော့ တားဂတ်က လောလောဆယ် ၂ ခုပဲရှိတယ်။ ကျနော်တွေ့ရတာ အဲဒါ အဓိကကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စရယ်၊ လွှတ်တော်ထဲမှာ တပ်မတော်သား အစိပ်သားကျန်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေပေါ့နော် အဲဒီနှစ်ခုကိုပဲ သူတို့တွေ ပယ်ပယ်နယ်နယ် သူတို့မှာ ပြောစရာရှိတာပေါ့။ အရင်လောက်တော့ အများကြီး ပြောစရာမရှိတော့တဲ့ အနေအထားမျိုး သံချပ်ထိုးစရာမရှိတော့တဲ့ အနေအထားမျိုးတွေ ဖြစ်နေတယ်ဗျ။”
NLD အစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်း သူတို့အဖွဲ့က ထောက်ပြ သံချပ်ထိုးခဲ့တယ်လို့ လူရွှင်တော် မောင်မေတ္တာ က ပြောပါတယ်။
“အာဏာရတဲ့အစိုးရလို့ပြောရင် သုံးတဲ့အသုံးနှုန်းက မှားနေတယ်ဗျ။ လက်သန်းကိုယ်စီ ညီညီညာညာနဲ့ သက်သေပြခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ ပြည်သူ့ကျေးကျွန်၊ ပြည်သူ့အစိုးရ အဲ ကျနော်တို့သံချပ်မှာဗျာ ဘာပြောသလဲဆိုရင် နိုင်ငံတော်တံဆိပ်ကို အလေးပြုဖို့ပေါ့။ နိုင်ငံတော်တံဆိပ်ရှိတယ်ဗျာ။ မြန်မာနိုင်ငံက အစကတည်းက နိုင်ငံတော်တံဆိပ်ဟာ မပြောင်းလဲဘူး။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလံ ပြောင်းနေတာ ၃ ခါရှိပြီ။ ၃ ခုစလုံး နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေ အလေးပြုခဲ့သလို၊ နိုင်ငံတော်တံဆိပ်ကို နိုင်ငံအကြီးအကဲများကလည်း အလေးပြုပေးပါဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောချင်တယ်ဗျာ ဒါပဲ။”
သံချပ်အဖွဲ့တွေကို လူတွေ စိတ်ဝင်စားမှုရှိပေမဲ့ ဟိုအရင် အနှစ် ၃၀ ကျော်က သံချပ်ခေတ်ကိုတော့ မမီနိုင်သေးဘူးလို့ ကိုသီဟသွေးက မြင်ပါတယ်။
“သံချပ်အဖွဲ့တွေဟာ နားထောင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ ဟိုတုန်းကလိုမျိုး မဆလခေတ်တခေတ်လုံး အစဉ်အလာရှိခဲ့တဲ့ သံချပ်တွေ အဲဒီလို ကာလကိုတော့ မမီသေးဘူးဗျ။ ဒါပေမဲ့ အခုကျတော့လည်း သူတို့တွေ လှည့်ပြီးတော့ ဖျော်ဖြေကြတဲ့အခါ လူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုတွေ အထိုက်အလျောက်တော့ ရှိပါတယ်။”
အရင်နှစ်တွေထက် လုံခြုံရေးရော စည်းကမ်းပါ တင်းကျပ်ထားတဲ့ ဒီနှစ် အတာသင်္ကြန်အတွက် “သာဓုပါဗျာ” သံချပ်အဖွဲ့က နှစ်သစ် ဆုမွန် တောင်းလိုက်တယ်လို့ မောင်မေတ္တာ က ဆိုပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံလုံးသာမက တကမ္ဘာလုံး ပစ်ခတ်မှုတွေ ငြိမ်းချမ်းပါစေ။ မနာလိုမှုတွေ ကင်းဝေးကြပါစေ။ စုစုစည်းစည်းနဲ့ ကမ္ဘာကြီးကိုလှအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်သော ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများ ဖြစ်သလို မြန်မာနိုင်ငံကို လှအောင် မြန်မာနိုင်ငံကို ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ထည်ဝါအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်အကြီးအကဲများ စုပေါင်းမိကြပါစေ။ ညီညွတ်ကြပါစေ။ အရောင်မခွဲဘဲ လူတစုတည်း ဆိုတဲ့စိတ်ထက် မြန်မာတ၀ှမ်းလုံး စိတ်ကို ဆောက်တည်ပြီး တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုး ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းချင်ပါတယ်ဗျာ။”
ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာ တကသ ကျောင်းသားအဖွဲ့ကလည်း ခွပ်ဒေါင်းမျိုးဆက်ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ သံချပ်အဖွဲ့တဖွဲ့လည်း လိုက်လံဖျော်ဖြေနေပြီး အစိုးရကို သရော်တဲ့ သံချပ်တွေ ထိုးကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။